Ndeapi matambudziko madiki kana uchishandisa bofu rivetsⅠ?
Pop rivets akasiyana nezvipikiri zvakajairika. Zvipikiri zvakajairika zvinoshandiswa kugadzirisa, nepo pop rivets anoshandiswa sematurusi ekubatanidza. Akareba sefenzi, uye maturusi chaiwo anofanirwa kushandiswa mukushandiswa. Dzimwe nguva kune mamwe matambudziko ari mukushandiswa nekuda kwekushanda kwakaoma. Anotevera matambudziko ari nyore....Verenga zvimwe »
Ndeapi marapirwo epamusoro ane pop rivetsⅢ?
Kushandiswa uye kutsanangurwa kwe rivet nut
Parizvino, zvakatemwa zve rivet nzungu muyero yenyika zvinosanganisira m3 M4 M5 M6 M8 M10 M12. Muchokwadi, M6 uye M8 inokurudzirwa, nekuti kana shinda idiki, inogona kubatwa zvakananga pane substrate yekubatanidza. Kana shinda yakakura, uremu hwebhaudhi huchawedzera zvakanyanya, uye t...Verenga zvimwe »
Ndeapi marapirwo epamusoro ane pop rivets Ⅱ?
Nguva yekutumira: Nov-25-2021
Ndeapi marapirwo epamusoro ane pop rivets ini?
Ndeapi maitiro engoma imwe chete inodhonza mbambo uye kaviri dhiramu dhonza mbambo?
Ngoma imwe chete ngoma. Basa rayo nderekudhonza magumo emuviri werivet mudhiramu rimwe chete mushure mekuita riveting. Multi drum type ndeyekuridza madhiramu akawanda. Basa rayo ndere kuwanda chigubhu rivet musoro uye kuderedza kumanikidza kunobata pamusoro pezvikamu zvezvimiro. High simba fasteners vane ...Verenga zvimwe »
Chii chinonzi simbi chimiro dhonza rivet?
Simbi dhizaini inodhonza rivets inonzi zvakare Haima dhonza rivets, Haima Lek, inozivikanwawo seyakajeka mimhanzi pop rivets, Haima zvipikiri, light music rivets. Simbi chimiro chinodhonza rivet isimbi yekubatanidza ine yakasarudzika chimiro uye yakakwirira riveting simba, inova yechikamu chitsva chekusimbisa.Verenga zvimwe »
Hunhu uye zviitiko zvekushandisa zvesimbi chimiro chinodhonza rivets?
Iyo simbi dhizaini inodhonza rivets inoratidzirwa ne: Iyo ine yakanaka gomba yekuzadza kuita, yakanaka kusimba kwemhepo uye yakakwirira riveting simba. Nguva dzekushandisa dzesimbi chimiro chinodhonza rivets: Inokodzera minda yeriveting ine yakakwira yepamusoro zvinodiwa, yakakwirira riveting simba zvinodiwa ...Verenga zvimwe »
Ndezvipi zvakanakira simbi chimiro rivet musangano?
Zvakanakira zvesimbi dhizaini rivet musangano: Zvimiro zvekudhonza rivets anoshandiswa kukurumidza imwe-sided yekuvaka yekubatanidza, iyo inogona kusangana nezvinodiwa zvekugera uye kusimba kuramba. Mabhenefiti makuru mukushandiswa anosanganisira: Single side kuvaka, high shear uye tensile simba, yakafara r ...Verenga zvimwe »
Iyo rivet nut pfuti inoita sei rivet nati
Kushandisa: tinoda kushandisa nzungu pamashizha matete esimbi. Nekuda kwekuti mashizha ematare matete akatetepa kuti asarukwa, tinoda kushandisa riveting nut gun kana riveting nut. 1.Idzo nhatu dzinodhonza riveting nzungu mumufananidzo unotevera dzakavharwa sandara musoro wakazara hexagon dhonza chivharo M6 kubva kuruboshwe kuenda kurudyi. 2.Tsvaga kudhonza...Verenga zvimwe »
Nzira yekushandisa sei rivet nzungu nemazvo
Kushandiswa kwakakodzera kwe riveting nuts kuchawedzera hupenyu hwebasa. Nhasi ndichakutora kuti uone kuti kushanda kwakakodzera hakugone kuderedza sei hupenyu hwesevhisi yeriveting standard parts? 1, Iva nechokwadi chekutarisa maburi ekukwira ehukuru hwakatarwa kune yega yega riveted fastener. 2, Iva nechokwadi chekuti ...Verenga zvimwe »
Ndeapi ma taboos ekuvaka e rivet nut fasteners?
1, Usaisa kabhoni simbi riveted fasteners kana Stainless simbi riveted fasteners pamberi anodizing kana profiles kurapwa kwealuminium ndiro. 2, Usabvisa periphery usati waisa riveted fasteners - sezvo deburring icharasikirwa nesimbi inoshandiswa kusungira fasteners uye mahwendefa ....Verenga zvimwe »